Rastrabani.com | मुलुक सवा ९ अर्ब घाटामा, कसरी ? - Rastrabani.com मुलुक सवा ९ अर्ब घाटामा, कसरी ? - Rastrabani.com
काठमाडौँ । वस्तु व्यापार अनुकूल नभएको र बाहिरबाट आउने रेमिटयान्सको वृद्धि पनि घट्दो क्रममा रहेकाले मुलुक पछिल्लो समय सवा ९ अर्ब घाटामा छ ।
गत मंसिरमा मुलुकको शोधनान्तर सवा ९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । बाहय अवस्था सन्तुलित रूपमा अघि बढ्न नसक्नुका साथै रेमिटयान्स वृद्धिदर लगातार घटेपछि शोधनान्तर घाटामा गएको हो ।
पछिल्ला दुई महिनायता रेमिटयान्स वृद्धिदर ऋणात्मक छ । कात्तिकमा १.५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको रेमिटयान्स वृद्धिदर मंसिरमा ०.८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।
यसकारण मंसिरमा शोधनान्तर स्थिति ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर २८ अर्ब ७८ करोडले बचतमा थियो ।
आयातमा उच्च वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटयान्स आप्रवाहमा कमी आएकाले चालु खाता र शोधनान्तर घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बुधबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको समग्र आर्थिकतथा वित्तीय स्थितिमा यस्तो उल्लेख छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य स्रोत रेमिटयान्स वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, निर्यात, पर्यटनलगायत बाहय क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसेकेकोलगायत कारण शोधनान्तर घाटा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
शोधनान्तर घाटामा रहँदा खासगरी, विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउँछ ।
शोधनान्तर र चालु खातामा गत वर्षदेखि नै चाप पर्न थालेको थियो । गत आर्थिक वर्ष पहिलो २ महिना साउन र भदौमा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका महिनाहरूमा शोधनान्तरमा सुधार देखिँदै आए पनि चालु खाता ऋणात्मक रहेको थियो । यो आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनामा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो र शोधनान्तर ऋणात्मक बन्यो ।
त्यसपछिका दुई महिना (असोज र कात्तिक) महिनामा शोधनान्तर बचतमा देखिए पनि आकार घट्दै गएको थियो । तर, मंसिरमा शोधनान्तर सवा ९ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।
गएको पाँच महिनामा ३३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १७.१ प्रतिशतले बढेको हो । सो अवधिमा भारततर्फ ५.५ प्रतिशत, चीनतर्फ ७८.४ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ १२ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । जसमध्ये पशु आहार, वनस्पति घिउ, धागो, जिंक सिट, तयारी पोसाकलगायतको निर्यात बढेको छ । तर, जुस, अलैंची, जीआई पाइप, उनी गलैंचा, तामाका तारलगायतको निर्यात घटेको जनाइएको छ ।
रेमिटयान्स आप्रवाह ऋणात्मक रहेको, व्यापार घाटा अकासिएको, शोधनान्तर घटेकोलगायत अवस्थामा पनि वित्तीय अवस्था सामान्य रहेको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । ‘आन्तरिक वित्तीय बजारको अवस्था केही कसिलो रहनुका साथै ब्याजदरमा केही अस्वाभाविक प्रवृत्तिदेखिए पनि समग्र वित्तीय अवस्था सामान्य नै छ,’राष्ट्र बैंकले भनेको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जारनिक्षेप तथा पुँजी अनुपात सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले लिएको अडान, खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोरमार्फत नियमित रूपमा तरलता व्यवस्थापन गरिरहेकाले ब्याजदरमा स्थायित्व देखिन थालेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।